မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): ဖုန်းမလိုပဲ.. Gtalk & Facebook အကောင့်သစ်ဖွင့်နည်း ( 70 % Working )
ဖုန်းမလိုပဲ.. Gtalk & Facebook အကောင့်သစ်ဖွင့်နည်း ( 70 % Working )
ဒီနည်းလေးကတော့..အရင်က.. Technological Villa မှာ.တင်ပေးဘူးပါတယ်..။ ဒါပေမယ့်.. သိပ်မရခဲ့ပါဘူး.။ ခုတော့.. ဘာမှ.စိတ်မပူနဲ့တော့.. ဖုန်းနာပါတ်တောင်းလည်း.ကိစ္စမရှိတော့ပါဘူး.. Virtual phone number လေးသုံးပြီး.. Google နဲ့ Facebook ကို..လှည့်စားလိုက်ကြရအောင်.. ^_^
ဒီတိုင်းထားပြီး.. I agree ဆိုတာ.အမှန်ခြစ်ခြစ်ပြီး.. Next ကိုဆက်နှိပ်လိုက်ပါ.။
ဖုန်းနာပါတ်တောင်းပါလိမ့်မယ်.။ Virtual phone number တစ်ခုယူဖို့အတွက်. ဒီကို အရင်သွားလိုက်ပါ..။
Sign Up Here ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..။
Email နေရာမှာ.မိမိရဲ့.. gmail ဖြည့်လိုက်ပါ.။
Re-enter Email နေရာမှာလည်း..မိမိရဲ့.. gmail ဖြည့်လိုက်ပါ.။
Security Code နေရာမှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့. ဂဏန်း.. ၄ လုံးပေးလိုက်ပါ..။ ဥပမာ 1234
အားလုံးပြီးရင်.. submit နှိပ်လိုက်ပါ..။
သင့်ရဲ့..Virtual phone number နဲ့.. gmail လိပ်စာကို.ပြပါလိမ့်မယ်..။ သေသေချာချာမှတ်ထားပါ.။
Phone Number: 206-984-8231
Security Code: 1233
Gmail ပြန်သွားကြရအောင်နော်... ဟီး..
Gmail မှာ..Next ကိုနှိပ်လိုက်တော့.. Voice Mail ? Text Message ပို့မှာလားဆိုပြီး. ဖုန်းနာပါတ်တောင်းပါလိမ့်မယ်..။
အဲ့နေရာမှာ.. Voice mail ကိုေ၇ွးပြီး.. ခုနက.ရလာတဲ့.. Virtual phone number ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ..။
ဖုန်းနာပါတ်က.. 206-984-8231 ဆိုရင်.. - တွေကို ဖြုတ်ပြီး.. 2069848231 လို့ထည့်ပေးလိုက်ပါ..။
1 မိနစ်အတွင်. www.k7.net ကို.. voice mail ၀င်လာပါလိမ့်မယ်..။
voice mail ကို.. နားထောင်ဖို့.. ဒီ ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..။
10 digit Phone Number OR Master Email Address: နေရာမှာ.. ခုနက Gmail ထဲဝင်လာတဲ့ ဖုန်းနာပါတ်ကို ထည့်လိုက်ပါ..။ - တွေမပါပါစေနဲ့..။ ဥပမာ.. 2069848231 လို့ပဲပေးလိုက်ပါ..။
Security Code OR Master Security Code: ကိုယ်ပေးခဲ့တဲ့.. ဂဏန်းလေး လုံးကိုရိုက်လိုက်ပါ..။
Check for messages ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..။ အောက်ကပုံအတိုင်း.. voice mail ကိုတွေ့ပါလိ့မ်မယ်.။
Save to Disk ကိုနှိပ်ပြီး.. download ဆွဲလိုက်ပါ.။ Download ဆွဲပြီးရင်..နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါ.။ ဂဏန်း ၆ လုံးပါတဲ့..code number ပြောပါလိမ့်မယ်.။
အဲ့ဒီ code number ကို.. ခုနက Gmail က တောင်းတဲ့နေရာမှာဖြည့်ပေးလိုက်ပါ.။
ဒါဆိုရင်လည်း. Gmail အတွက်..အဆင်ပြေသွားပါပြီ...။
Facebook မှာ..ဖုန်းနာပါတ်မတောင်းစေချင်ရင်.. လွယ်ပါတယ်.။
First Name နဲ့ Last Name ကို.. English ပဲ..ထားပြီး..ဖွင့်လိုက်ပါ.။
ဥပမာ.. First Name>>> Jhon , Last Name >>> Smit
အဲ့လိုမျိုး..English နာမည်ပေးလိုက်ရင်.. အိုကေသွားပါလိမ့်မယ်..။
စစဖွင့်ချင်းတော့.. English နာမည်ပဲ..ပေးလိုက်ပါ.။
Facebook မှာ.ဖုန်းနာပါတ်တောင်းရင်.. msg ပဲပို့ပါတယ်..။
K7.net က.. voice mail ပဲရပါတယ်..။
msg အ၀င်လက်မခံပါဘူး..။ ကိုယ်တိုင်နည်းနည်းကြိုးစားကြည့်ပါ... ဖွင့်တဲ့သူ အယောက် ငါးရာကျော်မှာ လေးရာ့ငါးဆယ်ကျော်အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်... :)
IF you like my post , Please Visit at Myanmar IT Helper ( www.mmithelper.com )
Author Myanmar IT Helper at 1:10:00 PM
Labels: Facebook အကောင့် ဖွင့်နည်း
Nay Lin Htike said...
facebook ac မှာ acဖွင့်ပြီး comfimation code ပေးဖို့ ph no တောင်းတယ် ph no ရိုက်ထည့်တော့လည်း မရဘူး
fb acဖွင့်နည်း အဆင့်ဆင့် ပြောပြလို့ရရင် naylinhtike8@gmail.comကို
myo kyaw said...
yuyu win said...
lwan saung said...
မရဘူး Access Denied ဖြစ်နေတယ်
ရတော့လည်း အသံဖိုင်က အပြည့်မပါဘူး :(
access denied ဖြစ်နေတာကတော့ Google မှာ K7.net လို့ ရိုက်လိုက်ရင် K7 (Sign Up Here) ကို ရမယ်
နောက်ပြီး အသံဖိုင်လိုချင်ရင် အပေါ် ညာထောက်ဒေါင့်လေးက my K7 ကို နိုပ်လိုက်ရင် အသံဖိုင်ရမယ်။ အဲဒါကို save to disk နိုပ်ပြီး ဒေါင်းလိုက်ရင် code number ပေးလိမ့်မယ်။
အဆင်တော့ပြေတယ် ကျွန်တော်အသံဖိုင်မှာ ကျတော့ အပြည့်မပါဘူး ဂဏန်း4 လုံးပဲပါတယ် အပြည့်မပါဘူး :(
ko maung အလုံးအဆင်ပြေတယ်........နောက်ထပ်နည်ပညာတွေတထက်တင်ပေးပါဦး.......
kokhant lay said...
fb acဖွင့်နည်း အဆင့်ဆင့် ပြောပြလို့ရရင် 1100rooney@gmail.com ကိုပြောပြပေးပါနော် .....ကျွန်တော်fbကလော့ကျသွားလို့ ပါ
ni kar said...
Bro,my facebook account was locked.Facebook asked me for confirmation code to my phone number,although I tried to get confirm code with my phone number several times,facebook doesn't give me code to my number.Please help me in any possible way,I am getting into trouble.Bro,please send meamessage about that to /nikar.1991@gmail.com
Jasmine Angelar said...
bro voice mail do not come in gmail.please show the way to jasmineangelar@gmail.com